abcnepali | » विदेशबाट उद्धार गर्ने तालिका सार्वजनिक, कुन देशका नेपाली कहिले आउँदैछन् ? विदेशबाट उद्धार गर्ने तालिका सार्वजनिक, कुन देशका नेपाली कहिले आउँदैछन् ? – abcnepali
abcnepali June 11, 2020
काठमाडौं : कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सरकारले धमाधम उद्धार कार्य सुरु गरेको छ ।
यस्तै २१ जुनमा दक्षिण कोरिया र मस्कट ९ओमान०बाट नेपाल एयरलाइन्सले नेपालीहरुको उद्धार गर्ने छ । कुवेत र क्वालालम्पुरबाट हिमालय एयरलाइन्सले जहाजको उडान हुने छ ।
विदेशबाट उद्धार गरिने नेपालीहरुलाई होटल क्वारेन्टिनमा राख्ने सरकारको नीति छ । क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गर्ने होटलहरुको सूची सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।अनलाईन खबरबाट